Isitshalo sokuxuba ukhonkolo SjHZS75-3E sisebenzisela amakhasimende aseMyanmar | Shantui
Isitshalo sokuxuba ukhonkolo SjHZS75-3E sisebenzela amakhasimende aseMyanmar
Isitshalo sokuxuba ukhonkolo wasolwandle iShantui Janeoo SjHZS75-3E uqede ngempumelelo ukukhiqizwa komthwalo osindayo ngo-Okthoba 9,2020.Kwezinsuku eziningi zokuqondiswa kude, kuvula umgwaqo wokwakha inani lamakhasimende aseMyanmar.
Ethintwe yisifo esiwumqedazwe, unjiniyela wesevisi ngemuva kokudayiswa akakwazi ukuya esizeni saseMyanmar ukuze athole ukuholwa.Shantui Janeoo unikezela ngesiqondisi esikude nge-inthanethi ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokufaka nezokuthunyelwa. Ngenxa yenqubekela phambili yokwakhiwa kwesiza, ukufakwa kubuye kube ngezikhathi ezithile, umnyango wezokusekelwa kwezinsizakalo unqobe ubunzima obuningi bokuqondisa ikhasimende ngesineke. Ngemuva cishe kwezinyanga ezine zomsebenzi onzima, isitshalo sokuxuba ukhonkolo wasolwandle iSjHZS75-3E ekugcineni sathola ukukhiqizwa komthwalo osindayo. Ikhasimende lineliseke kakhulu ngomphumela wemishini.
Esinyathelweni esilandelayo, uShantui Janeoo uzosebenzisa ubuchwepheshe obusha ukwenza ngcono izindlela nezindlela zokuqondisa kude ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle kweziqondiso ezikude zangaphandle nokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo esezingeni eliphakeme ilethwa kumakhasimende ngendlela ekhethekile.